Nhau - 2021CMEF: Kangyuan Inovandudza Hupenyu Hupenyu neSainzi neTekinoroji
Musi waMay 13, 2021, iyo 84th China International Medical Equipment Fair (CMEF) ine dingindira re "new tech, smart future" yakaitirwa muShanghai National Convention uye Exhibition Center. Nevanhu vazhinji vakapinda muexpo, kubwinya kwechiitiko kwakapfuura chero chiitiko chakapfuura.
Muchiratidziro ichi, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. inounza zvakawanda zvigadzirwa zvitsva, senge silicone foley catheter ine balloon yakabatanidzwa, silicone foley catheter ine tembiricha, silicone gastrostomy chubhu uye silicone tracheotomy chubhu, iyo yakwezva kutarisisa kwevanhu vazhinji. .
Umbwa muna 2005, Kangyuan ndokwenguva nzvimbo anenge 20,000m² ane wepagore goho ukoshi anopfuura mamiriyoni 100 Currencykuva. Iyo ine otomatiki ekugadzira mitsara, 4000m² yekirasi 100,000 yakachena kamuri uye 300m² yekirasi 100,000 rabhoritari inosanganisirwa neyebhuku kuongorora kuongorora kuchengetedzwa uye mhando yezvigadzirwa Mushure memakore anopfuura gumi ekudzikama akasimba, Kangyuan rave rakakura rezvokurapa zvigadzirwa zvinogadzirwa muEast China.
Nenzvimbo yepamusoro yekudyidzana
Kangyuan anozvipira kuvandudza mhando yekutarisira uye hupenyu hwevarwere
Kugovera veruzhinji mhando dzepamusoro dzekurapa dzinoraswa
2021CMEF ichaguma mumazuva maviri
Nzvimbo yedu yedumba ndeye 8.1ZA39